2021 को लागि भ्यालेन्टाइन डे रिटेल र ईकॉमर्स क्रेता भविष्यवाणी Martech Zone
यदि तपाईंको खुद्रा वा ईकामर्स व्यवसाय महामारी र लकडाउन को माध्यम बाट संघर्ष गर्दै छ, तपाईं आफ्नो मा केहि ओभरटाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ भ्यालेन्टाइन डे अभियानहरू जस्तो कि यस्तो देखिन्छ कि यो खर्चको लागि एक रेकर्ड वर्ष हो - आर्थिक चुनौतिहरूको बाबजुद! हुनसक्छ हाम्रो प्रियजनहरूसँग घरमा बढी समय बिताउनु भनेको प्रेमको ज्वालालाई प्रज्वलित गरिरहेको छ ... वा हामीलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ (ठट्टा गर्दै)।
एक राष्ट्रिय रिटेल फाउन्डेशन सर्वेक्षणले उपभोक्ताहरूले औसत average १ 196.31 XNUMX..XNUMX१ खर्च गर्न योजना बनाएको छ पछिल्लो वर्ष २१%previous १.161.96१.27.4 previous को पछिल्लो रेकर्ड। खर्च कूल २$. billion बिलियन डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत वर्षको रेकर्ड २०..32 अर्ब डलर भन्दा 20.7२% बढी हो।
भ्यालेन्टाइन डे ईकॉमर्स सांख्यिकी
यस अनुसार नेशनल रिटेल फाउन्डेशन, भ्यालेन्टाईन डे अब तपाईंको पति / पत्नीको प्रेम को कदर देखाउन एक दिन मात्र होईन। उपभोक्ताहरूले उनीहरूको महत्वपूर्ण अन्यको लागि उपहार किन्दै छन्, उनीहरूका बच्चाहरू, उनीहरूका शिक्षकहरू, सहकर्मीहरू ... उनीहरूका घरपालुवा जनावरहरू! १ Americans% अमेरिकीहरूले आफैंलाई भ्यालेन्टाइन डे उपहार पनि किन्छन्।
उपभोक्ता खर्च - उपभोक्ताहरू भन्छन् कि उनीहरू परिवारका सदस्यहरूमा औसत $ 30.19 खर्च गर्छन् जीवनसाथी बाहेक अरूपछिल्लो वर्ष $ २ .29.87। ;14.69 बाट केही माथि साथीहरूमा .9.78 १14.45;, $ 8.63 बाट माथि; Children's १.12.96 बच्चाहरूको सहपाठी र शिक्षकहरूमा, $ .7.78..12.21 बाट माथि; सहकर्मीहरूमा 6.94 १२. workers;, $ 10.60 बाट माथि; घरपालुवा जनावरमा .5.72 १२.२१, $ XNUMX from बाट, र अरूमा $ १०.XNUMX०, $ XNUMX२ बाट माथि।
घरपालुवा जनावरहरुका लागि भ्यालेन्टाइन दिवस - २%% उपभोक्ताहरू भन्छन् कि उनीहरू आफ्नो घरपालुवा जनावरहरूका लागि वेलेंटाइन उपहार किन्नेछन्, सर्वेक्षणको इतिहासमा सब भन्दा उच्च संख्या र २०१० मा १$ प्रतिशतले १.27 बिलियन डलरको लागि।
उमेर द्वारा खर्च - उमेर १-18-२–– औसत $ १० .24 ..109.31१ खर्च गर्न योजना गर्दछ। उमेर २-25--34 को उच्च आय र बच्चाहरूका लागि किन्नेछ र 307.51 35०44..358.78१ खर्च गर्न अपेक्षा गर्दछ। उमेर -XNUMX XNUMX--XNUMX the XNUMX$XNUMX मा सबैभन्दा ठूलो व्ययकर्ता हुन्।
लि by्ग द्वारा खर्च - सर्वेक्षणको प्रत्येक वर्षमा जस्तै, पुरुषले महिलाको तुलनामा 291.15 २ 106.22 १.१XNUMX मा बढी खर्च गर्ने योजना गर्यो compared १०.XNUMX.२२ को तुलनामा।
शीर्ष भ्यालेन्टाइन डे शपिंग कोटीहरू
मिति रात - alent 4.3 billion बिलियन भ्यालेन्टाइन डे सहभागीहरु 34 XNUMX% द्वारा एक विशेष रात मा खर्च हुनेछ।
क्यान्डी - २.2.4 बिलियन डलर V२% उपभोक्ताहरू द्वारा खर्च गरिनेछ जसले भ्यालेन्टाइन डे गिफ्टमा भाग लिने योजना बनाएका छन् - २२% चकलेट दिने योजना साथ।
आभूषण - 5.8 बिलियन डलर २१% मनाउनेहरूले भाग लिने योजना गर्छन्।
फूल - $ २.2.3 बिलियन खर्च हुनेछ% 37% जसले भाग लिने योजनामा।
उपहार कार्ड - यस वर्ष गिफ्ट कार्डमा २ अर्ब डलर खर्च हुनेछ।
अभिवादन कार्डहरू - alent १.1.3 बिलियन भ्यालेन्टाइन डे ग्रीटिंग कार्डमा खर्च हुनेछ।
तल कोटिहरूमा उपकरणहरू, जिम सदस्यताहरू, खेलकुदका सामानहरू, भान्साका उपकरणहरू, भरिएका पशुहरू ... र मिक्सक्टेपहरू समावेश छन् (के मानिसहरूले अझै पनि त्यसो गर्छन्?!)।
भ्यालेन्टाइन डे अभियानहरू
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि यस वर्ष धेरै ग्राहकहरूको लागि पैसा अझै तंग छ र भ्यालेन्टाइन डे उपहार दिनेमा धेरै सहभागीहरू अन्तिम मिनेटमा सम्पन्न हुनेछन् ... त्यसैले आफ्ना अभियानहरू सुरु गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई दिनसम्म पुग्नुहोस् जुन तपाईं डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ!
हामीले अर्को लेख र केहि संग इन्फोग्राफिक साझेदारी गरेका छौं महान वेलेंटाइन दिवस सामाजिक मीडिया प्रतियोगिता विचारहरु!
टैग: कैंडीचकलेटउपभोक्ता व्यवहारइकमर्सउपहार कार्डग्रीस कार्डहरूपहिचानगहनाप्रेमप्रेम हावामा छरेस्टुरेन्टरिटेलरहरूबाटप्रणय दिवसभ्यालेन्टाइन डे इन्फोग्राफिकभ्यालेन्टाइन डे उपभोक्ता खर्चभ्यालेन्टाईन डे उपहारभ्यालेन्टाइन डे रिटेल खर्चभ्यालेन्टाइन डे शपिंग